isiXhosa News @12:00, 06 eyoMga 2018 – Zibonele FM | 98.2
isiXhosa News @12:00, 06 eyoMga 2018
Written by Ashia Nkontsa on 06/12/2018
Azovela enkundleni amapolisa athyolwa ngokumaneminwe emide
Alindeleke ukuba avele namhlanje phambi kwenkundla kamantyi yaseMitchells Plain amalungu amabini egqiza elibekelwe bucala ukulwa namaqela emigulukudu elisandul’ukubekwa. Ngokutsho kweengxelo ezikhutshiweyo lamalungu aphakathi kweminyaka engamashumi mathathu anesihlanu namashumi mathathu anesibhozo ubudala abanjwe ngolwesibini waleveki ngezityholo zokubaneminw’emide emva kokutyholwa ngokuthatha isixamali esingadizwanga kwisefu yendlu ebesenza kuwo ugqogqo eBeacon Valley kwinyanga ephelileyo.
Iwelwe lityala lokudlwengula nokubulala uCortney Pieters
Inkqubo yokugwetywa kwendoda eminyaka ingamashumi mane anesibini ubudala ewelwe lityala lokudlwengula nokubulala imveku eminyaka mithathu ubudala ilindeleke ukuba iqalise kwakhona ngolwesibini weveki ezayo kwinkundla ephakamileyo yaseKapa. UMortimer Sondas ufunyenwe enetyala lokubulala uCortney Pieters eElsies River nyakenye nalapho umzimba woludwayi lwemveku wafunyanwa emva kweentsuku ezisithoba ulahlekile sele usonakala kwindawo yoshishine eEpping. Igunya bantu lezotshutshiso lidize ukuba lizakuzamela ukuba afumane izigwebo ezibini zobomi loka Sondas ukanti inkundla ayifunanga nokuva ngethuba uSondas enikela ubungqina bakhe ngelithi wabelana ngesondo nalemveki seyibanda ndaweni yoko yamfumana enetyala lokudlwengula.
iANC iphinde yali gcina ulawulo kwaWard9
Umbutho kakhongolose uphinde walugcina ulawulo lwawo kwa ward 9 kulonyulo lovalo sikhewu lwayizolo, kumasipala i Witzenberg cebu-kuhle e Ceres. le ward ibenesithuba emva kokuba uceba we ANC elahlile esikhundleni sakhe. Abagqatswa kolulonyulo bebephuma kumbutho we ANC, i DA, Cope kunye ne EFF. Umgqatswa we ANC umnumzana Mxolisi Ndaba uzuze ivoti ezisondeleyo kumashumi amahlanu. Olulonyulo bekufanele luqhubeke kwinyanga ephelileyo kodwa lwarhoxiswa ngenxa yokuba amanye amaqela ezopolitiko ebedinga ixesha elaneleyo lokugaya inxaso kubavoti babo.
UQhawu qhawuko lombane lusezo qhubeka kweli leKapa
Kukholeleka ukuba ukuqhawu-qhawuka kombane kungaphinda esezolo kwakhona kwiveki ezayo nanjengoko abasebenzi abalungisayo kwinkampani enkinkisha amandl’ombane uEskAom kudizwe ukuba basemaxhaphetshu bezama ukulungisa ezoyunithi zophukileyo zokunkinkisha umbane. Ngokweengxelo ezikhutshwenguEskom kudizwe ukuba ilizwe lomzantsi afrika lisekwisigaba sesibini nekulindeleke ukuba sibe siqalisile phakathi kwentsimbi yethoba kusasanje ukuya kwintsimbi yeshumi ngokuhlwa kodwa ngokwezigaba ezahlukeneyo. Lankampani igxininisile ukuba ukuqhawulwa kombane kuyakuthabatha malunga neeyure ezimbini ezinesiqingatha kungekhona usuku lonke nanjengoko bekukhe kwathi ndi iingxelo ezibetha eli lomzantsi afrika ngemf’iphindiwe ezidiza ukuba umbane uyakumka ngoqhiza wanamhlanje uyekubuya ngorhatya, kodwa ke bayacelwa abemi beli ukuba bawusebenzise ngenkathalo yaye neentambo zombane zithatyathwe njengezinombane maxa onke nanjengoko engaqinisekiswanga amaxesha okubuya kombane.
Amalungu eBhodi eSABC anqumamileyo
Nanjengoko iya ikhula intandabuzo malunga nenyewe yebhodi elawula ijelo losasazo iSABC kukwakho amantyontyelo okuba umongameli weli uMnumzana uCyril Ramaphosa angazamkeli izicelo zokulahla kwamalungu alabhodi amathathu. Ilungu lebhodi yejelo losasazo uSABC uKrish Naidoo ungqinile ukuba ngenene ulahlile njengelungu lalabhodi. Nangona kunjalo amanye amalungu amabini ebedizwe njengalahlileyo kulabhodi naquka usekela sihlalo uKhanyisile Kweyama kwakunye noJohn Mattison abakade bawone owabo umlomo malunga nalenyewe, ukanti akukade kucace ukuba ezinguqu zidalwe ncakasana yintlaganiso ebuthathaka kanobom osandul’ukubekwa esihlalweni sokubangumphathiswa wonxibelelwano unkosikazi Stella Ndabeni-Abrahams ebeyibambile nalebhodi kwiveki ephelileyo kusinina. Kwangaxeshanye kwelinye icala kukho iingxelo ezityhola ngelithi oku kuyanxulumana nesiniki maxabiso esingekho mthethweni nesiphantsi kophando sithetha nje ukanti iSABC iphike yema ngozwane kuleveki ukuba ingqonyela yalebhodi uMadoda Mxakwe naye unikezele wazinik’uphumaphele kulabhodi.
IPalamenete Isikhabile isicelo sokukhiqa umkhuseli woluntu
Isikhabile isicelo sokuqalisa inkqubo yokukhiqa umkhuseli woluntu kwi ofisi yakhe, ikomiti yase palamente ejongene nemiba yezobulungisa. Umbhexeshi we DA epalamente umnumzana John Steenhuisen ufake iscelo esikumila kunje kulekomiti ecela ukuba iqalise inkqubo yokumothula umkhuseli woluntu u advocate Busisiwe Mkhwebane kwisikhundla sakhe. eliqela lithyola lo ka Mkhwebane ngokungakwazi ukuwenza umsebenzi wakhe, itsho ikhankanya njengobungqina boko iziphumo zenkundla ezibini ezagweba ngokuchasene naye kuquka nengxelo yakhe ngakumba we fama yobisi yase Free state i Vrede Dairy Farm. Ukanti noxa lekomoti yase palamente iskhabile esisicelo kodwa kusekho amalungu epalamente asenemibuzo ngokulungela kuka advocate Mkhwebane le ofisi.